ဆူဒန်နိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ်က ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြုကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို - Xinhua News Agency
ဆူဒန်နိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Abdel-Fattah Al-Burhan အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြုလုပ်သော လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတစ်ခု၌ တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ခါတွန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဆူဒန်နိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan က နိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြုကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် ဆူဒန် TV က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်သည် စစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan က အာရပ်အုပ်စု လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Hossam Zaki ဦးဆောင်သည့် အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စစ်တပ်အနေနဲ့ ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ခံအစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိ ဒီမိုကရေအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ကတိပြုပါတယ်။”ဟု စစ်ဦးစီးချုပ်၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဆူဒန် TV က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Hossam Zaki က အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတွက် လက်သင့်ခံနိုင်သည့် ပြေငြိမ်းမှုတစ်ခု ရရှိစေရန် ဆူဒန်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအကြား ဆွေးနွေးမှု၏ အရေးပါပုံကို အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးစားပွဲဝိုင်း၌ ဆူဒန်အဖွဲ့များ ပါဝင်ရေး ကူညီရန် အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်က အသင့်ရှိကြောင်း Zaki က ထပ်လောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ် Al-Burhan က အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ကောင်စီနှင့် အစိုးရအား ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ဆူဒန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
အာဏာရညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တွင် အရပ်သားအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် လွတ်လပ်ရေး နှင့် ပြောင်းလဲရေး မဟာမိတ်အင်အားစုများက စစ်ဦးစီးချုပ် Abdel Fattah Al-Burhan သည် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ပြုလုပ်နေကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။ (Xinhua)
KHARTOUM, Nov.7(Xinhua) — General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan on Sunday reiterated commitment to democratic transition in the country, official Sudan TV reported.
Al-Burhan made the remarks when he receivedadelegation of the Arab League led by Hossam Zaki, assistant secretary-general of the Arab bloc.
Zaki stressed the importance of dialogue among all Sudanese components to reachasatisfactory settlement for all parties.
The Forces of Freedom and Change alliance, the civilian component in the ruling coalition, accused Al-Burhan of carrying outamilitary coup. Enditem
Photo – Chairman of Sudan’s Transitional Military Council Abdel-Fattah Al-Burhan speaks during the signing ceremony of the political and constitutional declarations to mark the beginning of the transitional rule, in Khartoum, Sudan, on Aug. 17, 2019. (Xinhua/Mohamed Khidir)